Now You See Me - Movie Relaz
Movie Review , Movie Trailers and All about Movies
နောက်တစ်နှစ်အကြာမှာတော့ သူတို့ လေးယောက်ဟာ The Four Horsemen ဆိုပြီး Las Vegas မှာ မျက်လှည့်ပွဲ တစ်ခု ပြသခဲ့ကြပါတယ် ။ မျက်လှည့်ပွဲရဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ကို စင်ပေါ်ကို တက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ။ ပြကွက်ကတော့ ပရိသတ်ကို လေပြွန်တစ်ခုထဲကို ထည့်လိုက်ပြီး Paris က ဘဏ်တစ်ခုဆီကို ရောက်သွားစေပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့နောက်မှာတော့ အဲ့ဒီဘဏ်က ပိုက်ဆံတွေကို Las Vegas က ပြပွဲဆီ ပြန်သယ်လာပြီး ပရိသတ်တွေထဲကို ကျဲချလိုက်ပါတော့တယ် ။
အဲ့ဒီ့နောက်မှာတော့ Rhodes , Dray နဲ့ Bradley တို့ဟာ The Four Horsemen ရဲ့ ဒုတိယ ပွဲဖြစ်တဲ့ New Orlens က ပွဲကို သွားပြီး ကြည့်ရှုကြပါတော့တယ် ။ အဲ့ဒီပွဲမှာလည်း ထုံးစံအတုိုင်း နောက်ဆုံး ပြကွက်အနေနဲ့
Tressler ဘဏ်က ငွေတွေကို ဖောက်ထွင်းပြီး ပရိသတ်တွေဆီကို ကြဲချလိုက်ပြန်ပါတယ် ။
ပြပွဲအပြီးမှာ Rhodes ဟာ The Four Horsemen အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကို Tressler ဘဏ်ဖောက်ထွင်းမှု နဲ့ ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း The Four Horsemen လေးယောက်လုံး လွတ်မြောက်သွားပါတယ် ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ The Four Horsemen ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ The Eye ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက် မှော်ဂိုဏ်း တစ်ခု ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါတယ် ။
J. Daniel Atlas , Henley Reeves , Jack Wilder , and Merritt McKinney တို့ဟာ ထူးဆန်းတဲ့ Tarot ကတ်ဒ်တွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှု က တစ်ဆင့် ဆ...
သိပ်မကွာတော့တဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုမှာ လူသား မျိုးနွယ်စုဟာ Kaijus လို့ ခေါ်တဲ့ ဂြိုလ်သားတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံနေရပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့ ဂြို...
Adam ဆို တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် က သူ့ ဂြိုလ် အကြောင်းကို ပြန်ပြောပြနေတဲ့ ပုံနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို စထားပါတယ် ။ တခြား ဂြိုလ်တွေနဲ့ မတူပဲ သူတ...
Copyright © 2011. Movie Relaz - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template Trickolla